के पुरुषले घरको काम गर्नै हुँदैन ? « Loktantrapost
के पुरुषले घरको काम गर्नै हुँदैन ?
१ जेष्ठ २०७३, शनिबार १३:५०
‘ड्याडी मेरो एड्मिसन गरिदिनुभयो ?’
‘ममीलाई सोध्नु ।’
‘अस्ति किताब सबै पाइएन, आज जाउँ न पसलमा । आयो कि ?’
‘ममीसँग जानु ।’
‘मेरो स्कूलको ड्रेस नयाँ किन्नु पर्ने ?’
‘ममीलाई भन्नु ।’
‘हाम्रो स्कूलमा मुटु रोगीलाई आज चन्दा दिनुपर्ने रे, ५० रुपैयाँ ल्याउनु भन्नुभएको छ सरले ।’
‘ममीसँग माग्नु ।’
‘ड्याडी खाना पाक्यो होला, ममी लुगा धुनु हुँदैछ, पस्किदिनु न ?’
‘पर्खी, ममीले पस्किदिन्छे ।’
‘नास्ता के लैजानु ?’
‘खै तेरै ममीले जान्दछे ।’
‘सबै काम ममीले मात्र गर्नुहुन्छ भने तपाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ ड्याडी ?’
‘म अफिसको काम ।’
‘ममी पनि त तपाईजस्तै अफिसको काम पनि गर्नुहुन्छ नि ?’
‘बढ्ता नबोल ।’
बाबुको स्कूल जाने समय भइसकेको थियो । म बाथरुममा लुगा धुँदै थिएँ । बाबु मेरो छेउमै आएर रुन्चे स्वर पारेर भन्यो–‘मामु खाना दिनु न मेरो स्कूल जाने समय भयो ?’
धँुदै गरेको लुगा छाडेर किचन छिरेँ । बाबुलाई खाना खुवाउँदै टिफिन तयार गरिदिएँ । अहो विहानको ९ बजिसकेछ । हैट ! दिन पनि कति छिटो बितेको । विहान ४ बजेदेखि उठेर गर्दा पनि काम सक्नै मुश्किल । मैले बाथरुपमा थुप्रिएका लुगा राति धुने निधो गरेँ । फटाफट भान्साको काम सकेर अफिस निस्कनु पर्ने । आज थुप्रै कार्यव्रmमको निम्तो पनि छ । विहानको कार्यक्रममा जान पनि भ्याइएन ।
बैठक कोठामा टीभी हेरेर बसेका पतिज्यूलाई पनि खाना खाना निम्तो दिएँ । सासु, ससुरा र अन्य परिवार सबैलाई खाना खुवाइसक्दा विहानको १० बजेछ ।
‘मेरो लुगा कता छ ? विहानभरि घरमै हल्लियो अनि कसरी व्यवसाय फस्टाउँछ त ?’–उनी फत्फताउँदै थिए । पतिका लुगा ठीक पारेर आफू पनि तयार भएँ । दुवै जनालाई एउटै कार्यव्रmममा निम्तो रहेछ । हतारहतार कार्यक्रमस्थलतिर बाटोभरि नबोली लागियो ।
हलभित्र प्रवेश गर्दा कार्यक्रम सुरु भइसकेको रहेछ । दुवैलाई अतिथि आसन ग्रहण गराए । कार्यक्रम रहेछ ‘महिला सशक्तिकरणमा पुरुषको भूमिका’ विषयक अन्तरव्रिmयाको ।
त्यहाँ समाजमा प्रतिष्ठित भनिएका थुप्रै व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो । अनि राजनीतिक दलका उपल्लो मानिएका नेताको । सबै पालैपालो बोल्दै थिए –‘जबसम्म हामी हाम्रा दिदी बहिनी, आमा र बुहारीलाई सम्मान, प्रोत्साहन र अवसर दिलाउन सक्दैनौँ, तबसम्म महिला सशक्तिकरण हुन गाह्रो छ ।’
त्यत्तिकैमा पतिज्यूको पालो आयो । मञ्चमा पुगेर माइक समाउने वित्तिकै भाषण सुरु भयो–‘आज तपाईहरूको यस कार्यक्रम भाग लिन आउनुभन्दा अघि मैले पत्नीलाई घर सफा गर्न, लुगा धुन र खाना पकाउन सघाए । किनभने हामीले महिला सशक्तिकरणका कुरा गरिरहँदा अरुलाई यसो गर्नु पर्छ, उसो गर्नु पर्छ भनेर उपदेश फलाकेर मात्र हुँदैन , हामी आफै उदाहरण बनेर देखाउन सक्नु पर्छ , उहाँहरूलाई सामाजिक क्षेत्रमा स्थापित गर्नका लागि हामीले घरको आधा काम सघाउनु पर्छ । यो काम पुरुषले गर्न नहुने महिलाले मात्र गर्न हुने भनेर कहिँ लेखिएको हुँदैन ।’
उहाँको कुरा सुनेर मलाई रिस उठ्यो । जुरुक्क उठेर ‘उहाँका कुरा झुठा हुन्’ भनुँ कि जस्तो लाग्यो । विहान छोरासँग घरमा भएको वार्तालापको याद आयो । घरमा रहुन्जेल सबै काम पत्नीको ठान्ने पुरुषहरू मञ्च पाउने वित्तिकै किन यस्तो कुरा गर्छन् ? के आसन र भाषणमा मात्र सीमित कुराले महिला सशक्तिकरण होला ? किन हाम्रा पुरुषहरू यसरी विरोधाभाषी हुन्छन् ? घरमा रहेका आमा, दिदी बहिनी र पत्नीलाई किन मायाको नाटक गर्छन् ? मनभित्र प्रश्नको आँधी उर्लियो ।
हिजो घरबाट बाहिर निस्केर हिंड्न र बोल्न बन्देज लगाएका महिलाहरुमा परिवर्तन आयो । उनीहरु आज घरपरिवारसँगै समाज र राष्ट्र हाँकिरहेका छन् । तर, मञ्चमा मात्र घरका काम आधा सम्हाल्छु भन्ने पुरुषहरुमा परिवर्तन आउन सकेन । यसले गर्दा महिलाहरु कामको दोहोरो मारमा परेका छन् । घरको काममा सहयोग भएन भने महिलाले बाहिरका काममा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण अनुरोध छ खोव्रmो भाषणले समाज र संस्कार परिवर्तन हुन असम्भव छ, बोलीलाई व्यवहारमा कार्यवन्यन गर्नतर्फ लाग्यौं ।